Adɛn Nti Na Nnipa Hu Amane?
Ɔwɛn-Aban | No. 3 2018
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Serbia) Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Adɛn Nti Na Yehu Amane?
Sɛ ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔma yehu amane a, ɛnde ɔkɔm kɛse, ohia buburoo, akodi a ɛyɛ hu, yare a emu yɛ den, ne atoyerɛnkyɛm no nyinaa fi he? Onyankopɔn Asɛm Bible ma yehu nneɛma mmiɛnsa a ɛma nnipa hu amane. Ɛno na edidi so yi:
Pɛsɛmenkominya, Anibere, Ne Ɔtan. “Onipa di onipa so ma ewie no bɔne.” (Ɔsɛnkafo 8:9) Mpɛn pii no, ɛyɛ nnipa a wɔtɔ sin, wɔyɛ pɛsɛmenkominya, anaa wɔn tirim yɛ den na wɔma afoforo hu amane.
Asiane Tumi Si. Nnipa taa hu amane “efisɛ asiane to wɔn nyinaa bere a wɔnhwɛ kwan.” (Ɔsɛnkafo 9:11) Wei kyerɛ sɛ yɛnam a asɛm tumi to yɛn, yebetumi anya akwanhyia, obi betumi de n’asiane abesian yɛn anaa afoforo betumi ayɛ ade a wɔn ani nna.
Ɔbɔnefo No Na Odi Wiase Yi So. Ade titiriw pa ara a ɛma nnipa hu amane no, Bible ma yehu no pefee. Ɛka sɛ: “Wiase nyinaa da ɔbɔnefo no tumi mu.” (1 Yohane 5:19) Saa “ɔbɔnefo no” ne Satan Ɔbonsam. Ɔyɛ honhom abɔde a ɔwɔ tumi, na na ɔyɛ Onyankopɔn bɔfo nanso “wannyina nokware no mu.” (Yohane 8:44) Abɔfo foforo kɔkaa Satan ho ma wɔyɛɛ Onyankopɔn so asoɔden sɛnea ɛbɛyɛ a wobedi wɔn ankasa akɔnnɔ akyi. Wei ma wɔbɛyɛɛ ahonhommɔne. (Genesis 6:1-5) Efi bere a Satan ne n’abɔfo bɔne no yɛɛ asoɔden no, wɔanya tumi kɛse wɔ wiase no so, na wɔama ɔhaw ahyɛ wiase no mu mã. Yɛn bere yi so pa ara na yehu wei kɛse. Seesei, Ɔbonsam bo afuw denneennen na “ɔredaadaa asase sofo nyinaa.” Wei akɔfa amanehunu pii aba asase so. (Adiyisɛm 12:9, 12) Anokwa, Satan yɛ sodifo a ne tirim yɛ den. Sɛ ohu sɛ nnipa rehu amane a, n’ani gye. Satan na ɔma nkurɔfo hu amane, na ɛnyɛ Onyankopɔn.
SUSUW HO HWƐ: Otirimɔdenfo a adwemmɔne ahyɛ no mã nkutoo na ɔbɛma nnipa a wɔn ho nni asɛm ahu amane. Nanso Bible ka sɛ: “Onyankopɔn ne dɔ.” (1 Yohane 4:8) Esiane sɛ Onyankopɔn yɛ ɔdɔ nti, “ɛmpare nokware Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ bɔne, ne ade nyinaa so Tumfoɔ sɛ ɔbɛyɛ nea ɛnteɛ!”—Hiob 34:10.
Nanso ɛnyɛ dɛn ara a wubebisa sɛ, ‘Enti Onyankopɔn bɛma Satan kwan ma wadi nnipa so wɔ atirimɔden kwan so akosi da bɛn?’ Sɛnea yɛabehu no, Onyankopɔn kyi awudisɛm, na sɛ yehu amane a ɛma odi yaw kɛse. Afei nso, n’Asɛm hyɛ yɛn nkuran sɛ: “Montow mo dadwen nyinaa ngu no so, efisɛ odwen mo ho.” (1 Petro 5:7) Onyankopɔn dɔ yɛn, na ɔwɔ tumi a ɔde beyi amanehunu ne atɛnkyea nyinaa afi hɔ. Asɛm a edi hɔ no bɛkyerɛkyerɛ saa asɛm yi mu. *
^ nky. 7 Nea enti a Onyankopɔn ama kwan ma amanehunu rekɔ so no, wopɛ ho nsɛm pii a, hwɛ Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu? nhoma no ti 11. Yehowa Adansefo na wɔyɛe. Wubetumi nso atwe bi wɔ www.jw.org/tw a wuntua hwee.
“Ná Nyankopɔn Wɔ He?”
Onyankopɔn Ani Wɔ Wo So Anaa?
Onyankopɔn Da Tema Adi Anaa?
Sɛnea Wubetumi Anya Onyankopɔn Dɔ So Mfaso
Amane a Worehu No, Onyankopɔn Te Nka Sɛn Wɔ Ho?
No. 3 2018 | Enti Onyankopɔn Dwen Wo Ho?
ƆWƐN-ABAN No. 3 2018 | Enti Onyankopɔn Dwen Wo Ho?